Забур 89 CARS - Nnwom 89 ASCB
Esrahini Etan ɔhaw ne amanehunu dwom.
1Mɛto Awurade adɔeɛ ho dwom daa daa;
mede mʼano bɛda wo nokorɛdie adi awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu.
2Mɛka sɛ wʼadɔeɛ no tim hɔ daa nyinaa,
na watim wo nokorɛdie wɔ ɔsoro hɔ ankasa.
3Wokaa sɛ, “Me ne onipa a mayi no no ayɛ apam;
maka ntam akyerɛ me ɔsomfoɔ Dawid.
4‘Mɛma wʼase atim hɔ daa
na wʼahennwa nso atim wɔ awoɔ ntoantoasoɔ nyinaa mu.’ ”
5Ao Awurade, ɔsorosorofoɔ kamfo wʼanwanwadeɛ,
na wo nokorɛdie nso, wɔkamfo wɔ ahotefoɔ asafo mu.
6Na hwan na ɔne wo Awurade sɛ wɔ ɔsoro hɔ?
Hwan na ɔte sɛ Awurade wɔ ɔsoro abɔdeɛ mu?
7Akronkronfoɔ agyinatufoɔ mu, wosuro Onyankopɔn;
wɔde suro ma no sene wɔn a wotwa ne ho hyia nyinaa.
8Ao Otumfoɔ Awurade Onyankopɔn, hwan na ɔte sɛ woɔ?
Ao Awurade woyɛ kɛseɛ na wo nokorɛdie atwa wo ho ahyia.
9Wodi ɛpo a ɛreworo soɔ so;
nʼasorɔkye bobɔ kɔ ɔsoro a, wobrɛ no ase.
10Wodwerɛɛ Rahab sɛ atɔfoɔ no mu baako;
wode wo basa denden no bɔɔ wʼatamfoɔ pansameeɛ.
11Ɔsoro wɔ wo, na asase nso wɔ wo;
ewiase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa, wo na wohyɛɛ aseɛ.
12Wobɔɔ atifi ne anafoɔ.
Tabor ne Hermon de ahosɛpɛ to dwom ma wo din.
13Tumi ayɛ wo basa ma;
wo nsam wɔ ahoɔden, wama wo nsa nifa so.
14Wʼahennwa no fapem yɛ tenenee ne atɛntenenee;
adɔeɛ ne nokorɛdie di wʼanim.
15Nhyira nka wɔn a wɔasua sɛdeɛ wɔbɔ wo abɔdin,
wɔn a wɔnante wʼanim hann no mu, Ao Awurade.
16Wɔgye wɔn ani wɔ wo din mu da mu nyinaa;
wɔdi ahurisie wɔ wo tenenee mu.
17Wone wɔn animuonyam ne ahoɔden,
na wʼadom enti yɛyɛ nkonimdifoɔ.
18Ampa ara, yɛn banbɔ firi Awurade hɔ,
na Israel Kronkronni no ama yɛn Ɔhene.
19Ɛda bi wokasaa wɔ anisoadehunu mu,
kyerɛɛ wʼahotefoɔ sɛ,
“Madom ɔkofoni bi ahoɔden;
mapagya aberanteɛ bi afiri nnipa no mu.
20Mahunu Dawid, me ɔsomfoɔ;
mede me ngo kronkron no asra no.
21Me nsa bɛwowa no;
ampa ara mʼabasa bɛhyɛ no den.
22Ɔtamfoɔ biara renhyɛ no sɛ ɔntua toɔ;
omumuyɛfoɔ biara rentumi nhyɛ ne so.
23Mɛdwerɛ nʼatamfoɔ wɔ nʼanim
na mabobɔ nʼahohiahiafoɔ ahwe fam.
24Me nokorɛ adɔeɛ bɛka ne ho,
na me din mu, wɔbɛma nʼabɛn so.
25Mɛtrɛ nʼahyeɛ mu akɔsi ɛpo so,
na ɔde ne nsa nifa bɛto nsubɔntene so.
26Ɔbɛfrɛ me aka sɛ, ‘Wone mʼagya,
me Onyankopɔn, me nkwagyeɛ botan.’
27Mɛyɛ no mʼabakan,
asase so ahene nyinaa no mu ɔkɛseɛ.
28Mɛma mʼadɔeɛ a mewɔ ma no no atena hɔ daa,
na apam a me ne no ayɛ nso bɛtena hɔ daa.
29Mɛma nʼase atim afebɔɔ,
nʼahennwa nso bɛtim hɔ akɔsi sɛ ɔsoro bɛtwam.
30“Sɛ ne mmammarima po me mmara
na sɛ wɔanni mʼahyɛdeɛ so,
31sɛ wɔbu mʼahyɛdeɛ so
na sɛ wɔanni me ɔhyɛ nsɛm so a,
32ɛno deɛ, mede abaa bɛtwe wɔn aso wɔ wɔn bɔne ho
na wɔn amumuyɛ nso mede mmaatwa atwe wɔn aso;
33Nanso, merennyae mʼadɔeɛ a meyɛ ma noɔ no
na mɛkɔ so adi no nokorɛ.
34Meremmu mʼapam no so
na merensesa deɛ mede mʼano aka no.
35Menam me din kronkron no so aka ntam prɛko,
na merentwa Dawid atorɔ da.
36Meremma nʼase ntɔre da
na nʼahennwa nso bɛtim wɔ mʼanim te sɛ owia;
37ɛbɛtim hɔ daa te sɛ ɔsrane,
ɔdansefoɔ nokwafoɔ a ɔwɔ ewiem no.”
38Nanso woapo no, woapa nʼakyi
wo bo afu deɛ woasra no ngo no.
39Woagu apam a wo ne wo ɔsomfoɔ pameeɛ no
woagu nʼahenkyɛ ho fi wɔ mfuturo mu.
40Woabubu nʼafasuo nyinaa
ama nʼabandenden adane mmubuiɛ.
41Wɔn a wɔtwam wɔ hɔ nyinaa fom no fa;
na wayɛ aniwudeɛ ama ne mfɛfoɔ.
42Woama nʼatamfoɔ nsa nifa so;
ama wɔn nyinaa di ahurisie.
43Woama nʼakofena ayɛ ɔkwa,
na woannyina nʼakyi wɔ ɔko mu.
44Wode nʼanimuonyam aba awieeɛ
na woato nʼahennwa atwene fam.
45Woatwa ne mmeranteberɛ nna so
na wode animguaseɛ ngugusoɔ akata ne so.
46Ao Awurade, ɛnkɔsi da bɛn? Wode wo ho bɛhinta afebɔɔ anaa?
Wʼabofuhyeɛ bɛkɔ so adɛre akɔsi da bɛn?
47Kae sɛdeɛ me nkwa nna twam ntɛm so.
Ɛfiri sɛ woabɔ yɛn nyinaa sɛ adeɛ a ɛtwa mu ntɛm so!
48Hwan na ɔbɛtena ase a ɔrenwu da?
Anaasɛ hwan na ɔbɛtumi agye ne ho afiri owuo tumi nsam?
49Ao Awurade, ɛhe na wo tete adɔeɛ kɛseɛ no wɔ,
deɛ wofiri wo nokorɛdie mu de kaa ntam kyerɛɛ Dawid no?
50Awurade kae sɛdeɛ wɔadi wo ɔsomfoɔ ho fɛ
ne sɛdeɛ manya akoma ama amanaman no akutiabɔ.
51Ao Awurade, akutiabɔ a wʼatamfoɔ de adi fɛw,
de adi deɛ woasra no ngo no anammɔntuo biara ho fɛw.
52Ayɛyie nka Awurade daa!
ASCB : Nnwom 89